Murder | Movie Guide !
Home! Action Animation Adventure Murder Thriller Comedy Drama Mystery Romance Sci-Fiction blog ! ရေးခဲ့သမျှ … Home \_ Murder Murder
THIHA | Crime, Murder
Fang Youwei ဟာ ရဲအရာရှိတဦးဖြစ်ပြီး Cosplay ပုံစံပြင်ဆင်ထားတဲ့ အမျိုးသမီး အလောင်းကို တွေ့ရှိရာမှ အမှုကို စတင်စုံစမ်းထောက်လှမ်းခဲ့တယ်.. စုံစမ်းနေဆဲကာလအတွင်းမှာပဲ ပုံစံတူ နောက်တဦး အသတ်ခံရပြန်တယ်… အမှုရဲ့ ကွင်းဆက် ထောက်လှမ်းမှု့အရ အသတ်ခံရသူအမျိုးသမီး ၂ ဦးဟာ Zhou Jin ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆိုတာ သိရှိခဲ့ရပြီး နောက်ထပ် အသတ်ခံရသူ ဖြစ်နိုင်ခြေဟာ Zhou Jin ဖြစ်နေတယ်… ဒါကြောင့် Zhou Jin ဆီမှာ သွားရောက် စုံစမ်းထောက်လှမ်းရာမှ အသတ်ခံတဲ့သူများရဲ့ Cosplay ပုံစံ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်.. ဓါတ်ပုံထဲမှာ ၃ ယောက်လုံး Cosplay ပုံဝတ်ထားတာကြောင့် လူသတ်သမားရဲ့ နောက်ထပ် ပစ်မှတ်ဟာ Zhou Jin ဆိုတာသေချာသွားပါပြီ… တရက်မှာ Zhou Jin ရဲ့ မရီး ဟာ Zhou Jin ရဲ့ ကားကို ငှားယူမောင်းနှင်သွားရာမှ Zhou Jin အမှတ်ဖြင့် အသတ်ခံလိုက်ရပါတယ်… […]	Read more CLOSED CIRCUIT (2013)
THIHA | Action, Adventure, Crime, Murder
လန်ဒန် ရဲ့ အထင်ကရဈေးတခုမှာ ပေါက်ကွဲမှု့တခု ဖြစ်ပွဲခဲ့ပြီး လူပေါင်း ၁၂၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်… ဒီဖြစ်ရပ်မှာ သံဒယရှိခြင်း ခံရသူ တဦး ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်… တရားလိုရှေ့နေအဖြစ်လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဆိုင်မွန် ဟာ ရုတ်တရတ် သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက် Martin Rose ကိုဆောင်ရွက်စေဖို့ လွဲပြောင်းပေးခြင်းခံရသလို တချိန်ထဲမှာပဲ တရားခံဖက်က ရှေ့နေအဖြစ် Claudia Simmons ကို ဆောင်ရွက်စေခဲ့ပါတယ်…သူတို့ ၂ ဦးဟာ မကြာခင်အချိန်တခုကမှ ပြတ်စဲထားတဲ့ လင်မယားတွေ ဖြစ်ပေမယ့် ဒီအမှုကို ပေးအပ်လိုက်ချိန်ကစလို့ တဦး နဲ့ တဦး မည်သည့် အကြောင်းနဲ့မှ ဆက်သွယ်ခွင့် နဲ့ ဆက်သွယ်မည် မဟုတ်ပါကြောင်း ကို ကတိပေးထားရပြန်တယ်.. တရာခံရှေ့နေ Claudia ဟာ MI5 […]	Read more perfume: the story ofamurderer
THIHA | Drama, Murder
perfume: the story ofamurderer အကြောင်း မပြတ်ကြသေးပဲကိုး . . မင်းသား အစက လုပ်ချင်တာက ရှိသမျှအရာ သက်ရှိ သက်မဲ့အားလုံးမှာ ရှိတဲ့ အနံ့ – သူရနေတဲ့ အနံ့တိုင်းကို အဆီထုတ် သိမ်းထားတဲ့ နည်းကို လိုချင်တာ . . . ဒါက သူ ပထမဆုံး မတော်တဆ သတ်လိုက်မိတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ ကိုယ်နံ့လို သေရင် ပျောက်ပျက်သွားမှာ စိုးလို့ . . . ဒါကြောင့် ရေမွှေးထုတ်တဲ့ ဆရာ (ဒပ်စတင်ဟော့ဖ်မန်းပေါ့လေ) ဆီမှာ တပည့်ခံတယ် . . .	Read more The Purge (2013)
THIHA | Murder, Thriller
အနာဂါတ် မှာ ရာဇဝတ်မှုတွေ နည်းပါးစေဖို့အတွက် နှစ် တနှစ်တာအတွင်း အချိန် တရက် ကို လုပ်ချင်တာ လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်… လူသတ်ချင်သတ် … လု ချင်လု .. စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ချင်တာ လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ် ဆိုပါတော့…. တနှစ်တာလုံး ချုပ်ထိမ်းထားသမျှ အဲ့တရက်မှာ လုပ်ချင်တာလုပ်ခွင့်ပေးပြီး လုံးဝအရေးမယူ မဖမ်းဆီးပါဘူး… Ethan Hawke ဟာ လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေ ၊ ပစ္စည်းတွေ ရောင်းချပြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝသူ တဦးပေါ့… တနှစ်လုံးရဲ့ တရက်တာကာလ ထိုနေ့လေးမှာပဲ သူဟာ လူတယောက်ကို မရည်ရွယ်ပဲ ကယ်တင်မိရာကနေစပြီး ဘယ်လိုတွေ ကြုံဆုံဖြတ်သန်းရမယ်ဆိုတာ – THIHA	Read more Frozen Ground
1971 မှ 1983 အတွင်း အသက် ၁၆ နှစ်ကနေ ၄၁ နှစ် အရွယ် မိန်းကလေးတွေကို ဖမ်းဆီးပိတ်လှောင်ပြီး မုဒိန်းကျင့်ခဲ့ပါတယ်… အယောက် ၃၀ ကျော်ခဲ့ပြီး အဲဒီထဲမှာမှ ၁၇ ယောက် ကို သတ်ပစ်ခဲတယ်လို့ ဆိုပါတယ်… ဖမ်းဆီးရမိချိန် သက်သေအဖြစ် ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရာမှာ ၁၁ ယောက်ရဲ့ အလောင်းတွေကိုသာ ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်… 1983 ခုနှစ်မှာ ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီး နိုင်ခဲ့ပြီး ထောင်ဒဏ် ၄၆၁ နှစ် ကို ကျခံမိန့် ချခံရတဲ့ Robert Hansen – ခုချိန်ထိ သူဟာ အလတ်စကာ က Spring Creek Correctional Center မှာ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေပါတယ်… ဒီလောက်အများကြီးသတ်ခဲ့ပြီး အချိန်တော်တော်ကြာမှ ဘယ်လိုသိရှိ ဖမ်းဆီးရမိသွားတယ်ဆိုတာ – တကယ့်အဖြစ်အပျက် ကို အခြေခံပြီး ထပ်တူနီးပါး ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ – THIHA […]	Read more Movie Guide ! - Close